CRC Monthly News (January 2011) « Chin Refugee Committee Delhi
« CRC Monthly News (December 2011)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၂ »
ဒီဇင်ဘာ၁၂-၁၆ရက်ကြားပြုလုပ်သော CNFအရေးပေါ် ညီလာခံသို့ တတ်ရောက်သော CRC မှ ဥက္ကဌ နှင့် ဂိုအော်ဒီနဲတာ တို့သည် ၂၃.၁၂.၂ဝ၁၁ တွင် ဒေလီမြို့သို့ ကျန်းမာစွာ ပြန်လည်ေ၇ာက်ရှိလာကြသည်။ဒေလီမှCRC လူကြီးများနှင့်အတူဤညီလာခံသို့တတ်ရောက်သူ စုစုပေါင်း ၉ ဦးရှိပါသည်။ CNF ညီလာခံသည် ယနေ့ချင်းအမျိုးသားများအတွက်အလွန်အရေး ကြီးကြေင်းနှင့်၁၉၄၈ဖလမ်းမြို့တွင်ကျင်းပသေ ချင်းအမျိုးသားများညီလာခံ နောက်ပိုင်း မြို့နယ်စုံ ပါဝင်ခြင်းအများဆုံးနှင့်လူဦးေ၇အများဆုံးဖြစ် မည်ဟုခန့်မှန်းရပါသည်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အစ္စန်ဆုံး ကျီခါးမှ ဒီတောင်ပိုင်း အစ္စန်ဆုံး ပလက်ဝတို့မှကိုယ်စားများစုံလင်စွာတတ်ရောက်ကြပြီး လူဦးရေ ၁၅၃ ဦး တတ်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေသည်အရင် ထက်ဆာပါကများစွာကောင်းလာဟုထိုင်းထင်ကြပါသည်။ဒေါ်စုပင်လျှင်ဦးသိန်းစိန်နှင့်လက်တွဲလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။မြန်မာပြည်သည် ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံစစ်စစ်ဖြစ်လာရန်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသည်ဟုထင်ကြသောနယူးဒေလီရောက်ချင်းဒုက္ခသည်တော်တော်များများပြည် တော်ပြန်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အရပ်ထဲမှရရှိသောသတင်းအရဆိုလျှင်ယခုအထိချင်းဒုက္ခ သည်(ဒေလီ)မှပြည်တော်ချင်းပြည်နယ်သို့ပြန်သွားသူစုစုပေါင်းမှာ(၅၀) ဦးနီးပါရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောက်ထပ်ပြန်ရန်ရထားလက်မှတ်ဖြတ်ထားသူ များလည်းရှိသေးကြောငသတင်းရရှိပါသည်။ဤသို့ပြည်တော်ပြန်ကြသူအများစုမှာဟာခါးကော်မြူနီတီမှ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ဟားခါး ကော်မြူနီတီရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ
ဆလိုင်း ကျဲအိုလျန်ထန်း (အတွင်းရေးမှုး) ဖုန်း–
ဇန္နဝါရီလ၈ရက်နေ့ညနေ၅း၀၀ခန့်တွင်District စင်တာမှပြန်လာသောမောင်ဟရဲထန်းနှင့်အဖေါ်သည်ဒီစတြိတ်စင်တာမှ(၁၀)မိနစ်ခန့်သွားပြီး နောက်ဒေသခံအယောက်(၃၀)ခန့်မှစီးနင်းလာ သောသုံးဘီးစက်ဘီးအားတားဆီး၍ရိုက်ကြပါ သည်။မသန်စွမ်းသူဖြစ်သော်လည်းမညှာမတာ ရိုက်ကြပါသည်။သူ၌ပါလာသောငွေ(၉)ထောင် နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပါလုယူသွားကြသည်။ပြီးနောက်ဒေသခံများမှခြေချင်ပြန်လွှတ်ကြသည်။ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ UNHCR ဘက်သို့ အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သော်လည်းယနေ့ထိကူညီထောက်ပဲ့မှုတစုံတရာမရရှိသေးကြောင်းကံယာကံရှင်မှCRCသို့ပြောပါသည်။လူတိုင်းအပြင်ထွက်တိုင်းငွေများများယူဆောင်မသွားကြရန်သတိပေးလိုပါသည်။မီးမလောင်ခင်တားဆိုသလိုပြသနာမ ဖြစ်မှီမိမိတို့၏ကိုယ်စီသတိတရားရှိကြရန်လိုအပ်ပါသည်။
ယ္ခုတလောResettlementခေါ်ယူရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍မဟာမင်းကြီးပြောပြချက်အရအဓိက ဦးစားပေးရမည်ကိစ္စ (၂) ရရှိသည်။
(၁)ကျန်းမာရေးနှင့်(၂)လုံခြုံရေးကိစ္စတို့ဖြစ်သည်။ဒါ့ကြောင့်လူတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စ(အထူးသဖြင့်နာတာရှည်ရောဂါသည်များ)များနှင့်မိမိတို့၏လုံခြုံရေးကိစ္စ(ဒေသခံကုလားလက်ချက်ခံရသူများ)CRCသို့အချိန်မှီသတင်းပေးပို့ကြပါရန်မေတ္တရပ်ခံအပ်ပါသည်။သို့သော်ဤသို့သတင်းများပေးပို့ရာတွင်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အ ထားများ(ဝါ)စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြနိုင်မှသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းပါထပ်ဆင့်မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ(၂၄.၂၅)ရက်နေ့များတွင်CRCမှဖွဲ့စည်းထားသောစုံစမ်းရေးကော်မီတီနှင့်India UNHCRမှမဟာမင်းကြီးနှင့်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှုမှမဟာမင်းကြီး၏ပြောဆိုချက်များကိုတင်ပြရမည်ဆိုလျှင်၂၀၁၂ခုနှစ်မှစ၍CRCမှကြီးကြပ်၍ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း(၂)ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်မ ဟာမင်းကြီးမှခွင့်ပြုလိုက်ပါသည်။သို့သော်ဤနေကလေးထိန်းကျောင်းသည်ကလေးလူဦရေအ ယောက်(၂၀)ခန့်သာထားနိူင်မည်အကန့်အသတ်ရှိနေ့ကလေးထိန်းကျောင်းသာဖြစ်ပါမည်။ဤနေ့ကလေးထိန်းကျောင်းသည်စာသင်ကျောင်းကဲ့သို့ စာသင်ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲ၊ကလေးထိန်းပေးမဲ့လူမရှိ၍အခက်အခဲဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသောမိဘများအတွက်သာဖြစ်ပေမည်။ထိုမိသားစုများမှမိမိတို့ရင်သွေးငယ်များကိုလာရောက်အပ်နှံ၍စိတ်အေးစွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမည်ဖြစ်သည်။ထိုနေ့ကလေးထိန်းကျောင်းကိုဟားစတားရပ်ကွက်တွင်တခုထားရန်နှင့်ကျန်တခုကိုမှူC1 ဘက်ဉ်ထားရှိရန် CRC ECအစည်းအဝေးမှဆုံးဖြတ် ပြီးဖြစ်သည်။ လက်ရှိ YMCA Tuition Centre မှာ YMCA Centre ဟုပင်ဆက်လက်ခေါ်ဆိုခြင်းမပြုရန်နှင့်RefugeesCentreဟုသာခေါ်တွင်စေရန်မှာကြားခဲ့သည်။၎င်းRefugeesCentreများတွင်တက်ရောက်လျှက်ရှိသောကလေးအားလုံးသည်လည်း၂၀၁၂၂၀၁၃ပညာသင်နှစ်တွင်အားလုံးအစိုးရကျောင်းများတွင်မဖြစ်မနေနာမည်စာရင်းပေးသွင်းရုံမဟုတ်ပဲပုံမှန်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။အစိုးရကျောင်းတွင်တက်ရောက်သူကလေးများသာRefugee Centre(YMCAကျောင်း)တွင်လက်ခံသင်ကြား ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်ဟု ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။ ဒါ့ကြောင့်ယ္ခုYMCACentreများတွင်တက်ရောက်လျှးက်ရှိသောကလေးအားလုံးကျောင်းဖွင့်သည်ကာလဇွန်ဇူလိုင်လတွင်အစိုးကျောင်းသို့မဖြစ်မနေစာရင်းသွင်း၍တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။၂၀၁၂မှစ၍UNHCRရုံးသို့လာရောက်လိုသူများအတွက်ပို၍အစဉ်ပြေစေရန်အလို့ဌါWomenCenter တွင်ဝန်ထမ်းအင်အားတိုးချဲ့ချထားမည်ဖြစ် သည်။ဤသို့ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်းအားဖြင့်သာမန်UNHCRသို့လာရောက်ရန်မလိုအပ်တော့ပဲ WomenCenterတွင်သာသွားရောက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။အကယ်၍အရေးပေါ်ကိစ္စ များအွင် ကြိုတင် ရက်ချိန်းAppointment များကို Women စင်တာတွင် တောင်းယူရမည် ဟု လည်းပြောကြားသွားပါသည်။ထို့အပြင် UNHCR NewDelhiမှ၂၀၁၂နှစ်သစ်မှာမှစ၍ဒုက္စသည်များစောင့်စားသည့်ကိစ္စအမျိုးမျိုးပိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်၍စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်နေကြရန်မှာ ကြားသွားပါသည်။
၁၂.၁.၂ဝ၁၂ညနေ ၆နာညီခန့်တွင် စီသားပူရီး ရပ်ကွက်တွင်အိန္ဒိယငွေစက္ကုတုများဖမ်းဆီးရည်ဟုသတင်းရှိပါသည်။အမှိုက်ပစ်စည်ပင်သာယာ ရေးကားကြီးပေါ်တွင်အမှိုက်ဟုထင်ရလောက် အောင်ငွေစက္ကုအတုများအပြည့်တင်ဆောင်ထားသည့်ကားကြီးတစီးသည်အမှိုက်များစုံပုံရာနေ ရာတွင်ရပ်နားထားပါသည်။ထိုအခိုက်ရဲများနှင့် စစ်သားများရာက်ရှိလာရာ ထိုကားကို ဖမ်းဆီး ၍စစ်ကြည့်ရာ ငွေစက္ကုတုများ တွေ့ရှိရကြောင်း စီသားပူရီးမှမျက်မြင်သက်သေများမှပြောပြသွား ပါသည်။
၁၂.၁.၂၀၁၂ ည ၁၁း၃၀ နာရီတွင်Hastal ရပ်ကွက်၌နေတိုင်သူချင်းဒုက္ခသည်၂ဦးဖြစ် သည်။Cung Aung နှင့် Jehu တို့နှစ် ယောက်ကို ကုလားလူငယ်များကစိတ်ကျေနပ်သည်အထိ ရိုက်ခဲ့ပြကြောင်းမျက်မြင်သက်သေတဦးမှ CRC သို့ပြောပြပါသည်။ဖြစ်ဖွားပုံမှာကုလားလူငယ်တ ဦးမှချင်းမ(ကိုယ်ဝန်၅လလွယ်ထားသူ)တဦးကိုမကောင်းသောမိန်းမလိုဆက်ဆံပြေဆိုသည်ကို ယောကျားဖြစ်သူကမကျေနပ်၍ပါးရိုက်ခဲ့သည်။ထိုသည်ကိုမကျေနပ်၍အဖော်များစုကာအရက် သောက်ကြပြီးပါးရိုက်သူချင်းလင်မယားအိမ်သို့လာကြသည်။အရက်မှုးကုလားလူငယ်များ ရောက်လာချိန်တွင်ထိုလင်မယားတို့သည်အိမ်၌မရှိခိုက်ဖြစ်သည်။သို့သော်ကုလားလူငယ်များသညထိုအိမ်၌်ရှိသောအပြစ်မရှိချင်းလူငယ်နှစ်ဦး CungAungနှင့်Jehuတို့ကိုအားရပါးရရိုက်ကြ တော့သည်။သံချောင်းများနှင့်ကြေကုန်းကိုရိုက်သည့်ဒဏ်ရာနှင့်ခေါင်းကွဲဒဏ်ရာ၊ရှေ့သွားတစ်ချောင်းကြိုးသည်အထိရိုက်ခဲ့ကြကြောင်းကြားသိရသည်။ဤအဖြစ်အပျက်ကို ဖြေရှင်းပေးရန် SLIC သို့တိုင်ထား ကြောင်းသိရှိရသည်။
(၆၄)နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို ခါတိုင်းကဲ့သို့စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိူင် ရန်အတွက်ဇန္နဝါရီလ(၉)ရက်နေ့တွင်CHROရုံး ဉ်ဖြစ်မြောက်ရေဆပ်ကော်မီတီိတရပ်ကိုအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်(၆၄) နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင်ရိုးရာအကအမျိုးမျိုးဖြင့်စည်း ကားစွာကျင်းပနိုင်ရန်မှာမူလူတိုင်း၊မိသားစုတိုင်း၏ငွေကြေးပေလှူမှုပွဲနေ့တွင်အားလုံးပူးပေါင်းပါ ဝင်မှုသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပေမည်။ဒါ့ကြောင့် လူတိုင်းမိမိတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါရန်နိုးဆော်အပ်ပါသည်။ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ဆပ်ကော်မီတီများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါ သည်။
(၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဆလိုင်း- လိုင်ထာ
(၂) ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဆလိုင်း -ဘူနိုင်း
(၃) အတွင်းရေးမှူး ပူး- ဗန်မွှန်လျှန်
(၄)တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ပူး- လာလ်ရမ်းမွန်နာ
(၅) ဘဏ္ဍထိန်း မိုင်- ဆောမ်သဲ
(၆) ဖိုင်နင့် အတွင်းရေးမှူး မိုင်- ဒေါ့သ်လှယ်ပါရ်
၂ဝ၁၂ ဖလမ်းယူနီယံ ဦးဆောင်ရန်အတွက် ရွးကောက်ပွဲကို၂၇.၁၁.၁ဝ၁၁စနေနေ့တွင် BCRC ဟောခန်းတွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ဤရွးကောက်ပွဲမှဥက္ကဌအဖြစ် ဆလှိုင်းVL(VanLalThlan)ကို၎င်း အတွင်းရေးမှုး အဖြစ်ရောဘတ်ကို၎င်းရွေးကောက်တင်မြောက် သည်ဟုသတင်းရရှိသည်။ဆက်သွယ်လူသူများ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဥက္ကဌ-၈၈ဝဝ၃၄၁၆၂၈ အတွင်းရေးမှုး-၉၆၅ဝ၂၅ဝ၄၇၇
ဇိုမီးကွန်မြူနီတီZCC၏၂၀၁၂အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကို ယခုလ ၁၃.၁၂.၂ဝ၁၂ တွင် ဘူဒဲလားရပ်ကွက်ရှိ ZCC ရုံး တွင် ကျင်းပမည်ဟု သတင်း ရရှိပါသည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ကနေဒါ နိုင်ငံမှ Mr.Victor Biak Lian နှင့် Pastor CungCinတို့သည်CRCရုံးသို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးသည်ချင်းတိုင်းရင်းသားးများအတွက်နေ့မနားညမအားအလုပ် လုပ်ကြသူများဖြစ်ကြသည်။ယ္ခုအခါဒေလီရောက် ချင်းဒုက္ခသည်များအားကနေဒါနိုင်ငံမှခေါ်ယူပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ဆဲဖြစ်ကြေင်းသိရပါ သည်။သူတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်ရန်ဆုတောင်း ခြင်း ဖြင့် အားလုံး ဝိုင်းဝန်းကူညီကြစို့။
This entry was posted on January 23, 2012 at 11:09 am	and is filed under Other Topics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
2 Responses to “CRC Monthly News (January 2011)”
chin miphun caana tuan taktak maw ? resettlement Duh caaCRC upa pawl nih chin refugee fa nua le pawl UNHCR sinaazawr tih hiahman siacun that dih na hua te lai hi kaanan luat zawngachinland nih biafak pi in an cheih te lai
ချင်းတို့ကိုသွေးအမျိုးမျိုးခွဲစေတဲ့အားကစားပွဲရပ်ဆိုင်းကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုပါတယ် CRC ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညံ့ဖျင်းမူကြောင်းဖြစ်ကြောင်း